I-China 6M MOBILE LED TRUCK -Ifoton Ollin mveliso kunye nabenzi | I-JCT
JCT 6m mobile LED iinkuphelostencils（Imodeli: i-E-AL3360 special yamkela itrass chassis ekhethekileyo yeFoton Ollin kwaye ubungakanani bezithuthi zizonke ngu-5995 * 2130 * 3190mm. Ikhadi lokuqhuba iBlue C likulungele oko kuba bonke ubude bezithuthi bungaphantsi kwe-6 m. E-AL3360 mobile LED iinkuphelostencils inokuchongwa ukuba ibe nokuxhotyiswa ngamacala amabini okanye macala amabini macala ngaphandle kwe-LED izikrini zemibala egcwele ubungakanani besikrini ukuya kuthi ga kwi-3520 * 1760mm enokuphakanyiswa kwicala elinye okanye omabini amacala. Amanqanaba e-hydraulic azenzekelayo anokuxhotyiswa, iloli ye-LED iya kuba lilori elihambayo xa amanqanaba eqhubeka. JCT 6m mobile LED truck has multimedia system that inasaidia U disk disking and mainstream video formats.
Uyilo lokudibanisa ikhabhathi
JCT 6m mobile LED iinkuphelostencils idibanisa amajelo eendaba kunye zombane iiterminal zokusebenza kwi imoto isithuthi ukuze kuqhubekeke nokwandisa amava yokusebenza ukuze yonke imisebenzi igqitywe kule cab.
Uqwalaselo olukhethekileyo lokuhamba ngenqanawa
Ukusebenza ngokupheleleyo kosasazo kunye nomyinge wokusetyenziswa kwamandla ukulawula isikrini se-LED kwi-6.2m2, ezinokwandisa ngokufanelekileyo iiyure zomsebenzi. Ukuxhobisa ngesigqubuthelo sokukhusela ukuqhubeka nokuqinisekisa ukusetyenziswa kwesiqhelo kwemeko yezulu nangaphandle.
Ukophula imida kunye nemimiselo
Uyilo lwekrisimesi encinci lwenza ukuba iilori ze-LED zikwazi ukuhamba ngokukhululeka esixekweni ngaphandle kwempembelelo embi yokuxinana kwezithuthi emva kokubhaliswa. Ngokwenene yenza iintengiso zidlale endleleni kwaye zisasazeka kwikona nganye yesixeko.
Umgangatho ophantsi we-EU kunye nokukhuselwa kwendalo
Ngokuhambelana nemigangatho yamanye amazwe, i-chassis esemgangathweni ye-EuroⅤ / Euro Ⅵ iyamkelwa ukonga umbane, ukunciphisa ukuphuma, ukukhusela okusingqongileyo kunye nokunciphisa izithintelo zokusingqongileyo.
Iimpawu zobugcisa beMveliso
1. Ubungakanani ngokubanzi: 5995 * 2130 * 3190mm;
2.I-LED yangaphandle yemibala epheleleyo yesikrini (P6) ubungakanani: 3520 * 1920mm;
3. Isikrini esibomvu sangaphandle esibomvu (P10) ubukhulu: 3520 * 320mm;
4.Ungasemva kwesikrini esinye esibomvu esingaphandle (P10) ubukhulu: 1280 * 1440mm;
5.Ukuxhotyiswa kwenkqubo yokuqengqeleka kwidijithali, enokuthi idlale imifanekiso emi-3 ukuya kwezi-6 emile iluphu;
Ukusetyenziswa kwamandla (umyinge wokusetyenziswa): 0.5 / m2/ H, ukusetyenziswa komndilili opheleleyo;
7. Ifakwe iprosesa yevidiyo exhasa u-U wokudlala kwakhona, ubukhulu becala ifomathi yevidiyo kunye nokudlala ngokuhambelana neselfowuni;
8. Ifakwe iseti ye-generator ethe cwaka, amandla 8KW;
9. Igalelo ombane 220V, ukuqala 25A yangoku.
Umzekelo E-AL3360（6m mobile LED truck-Foton Ollin）
Igama lebrand Ifoto Ollin Ubungakanani bangaphandle 5995 * 2130 * 3190mm
Amandla Ifoto Ubunzima bebonke 4495KG
Imigangatho yokukhutshwa EuroⅤ / Euro Euro Ukunciphisa ubunzima 4365KG
Amandla 8KW Inani leesilinda Amanzi apholileyo asemgceni 4-isilinda
Ubungakanani besikrini 3520 x 1920mm Phaya Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Icala led Screen Size 3520mm x 320mm Ubungakanani besikrini obukhokelwe ngasemva 1280 x 1440mm
Phaya Pitch 10 mm Ukuqaqamba 5000cd / m2
Ubungakanani beCanvas 3300mm x 1450mm Roller Ububanzi 75 mm
Igalelo Voltage 220V Yemveliso Ingozi 220V
Inkqubo yeVidiyo U-Novastar Umzekelo I-V900
Somlomo I-100W * ii-2pcs Isikhulisi samandla 250W
Egqithileyo 6m Mobile Exhibition Iinkuphelostencils-foton Aumark
Okulandelayo: I-JCT 4.2M Isigaba seTraki seTruck-Foton Ollin
Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck,